BOPP ကော်ထုပ်ပိုးတိပ်ဂျမ်ဘိုလိပ် China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:တဦးတည်းဂျမ်ဘို Roll,အရောင် Transparent ဖြစ်ပါသည်,စာရေးကိရိယာတိပ်အသုံးပြုခြင်း
 Homeထုတ်ကုန်များBopp တိပ်ဂျမ်ဘို RollsBOPP ကော်ထုပ်ပိုးတိပ်ဂျမ်ဘိုလိပ်
1. Bopp တိပ် 3. စိတ်တိုင်းကျပုံနှိပ်တိပ်
2. အသွေးအရောင်စုံထုပ်ပိုးတိပ် 4. စာရေးကိရိယာတိပ်
5. Bopp ဂျမ်ဘိုလိပ်
1 ။ PE လမ်းပိုင်းရုပ်ရှင်စီးရီးထုတ်ကုန်
2 ။ BOPP တိပ်စီးရီးထုတ်ကုန်
3 ။ PP / ပေသိုင်းကြိုးစီးရီးထုတ်ကုန်
4 ။ ထုပ်ပိုးစက်
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : Bopp တိပ်ဂျမ်ဘို Rolls
BOPP ကော်ထုပ်ပိုးတိပ်ဂျမ်ဘိုလိပ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တဦးတည်းဂျမ်ဘို Roll အရောင် Transparent ဖြစ်ပါသည် စာရေးကိရိယာတိပ်အသုံးပြုခြင်း Bopp တိပ်ဂျမ်ဘို Roll BOPP တိပ်ဂျမ်ဘို Rolls အရောင်ဂွမ်တိပ် Roll စစသိုင်းကြိုး Roll တဦးတည်းလူပျိုဘက်